Fiahiana ny fandriampahalemana :: Mitaky fampitomboana isa an’ireo mpitandro filaminana ny depiote • AoRaha
Fiahiana ny fandriampahalemana Mitaky fampitomboana isa an’ireo mpitandro filaminana ny depiote
Notanterahina, omaly hariva, teny Tsimbazaza ny fangataham-panazavana nataon’ireo depiote tamin’ ireo minisitra mpiahy ny fandriampahalemana eo anivon’ny governemanta. Nisongadina tao anatin’izany ny soso-kevitra naroson’ ireo depiote amin’ny “tokony hampitomboana ny isan’ireo mpitandro filaminana, indrindra any amin’ireo faritra mena”.
Nanao antso fanairana tamin’ny rafitra mpanatante­raka amin’ny fandraisana andraikitra misimisy kokoa manoloana an’ireo vono olona nisesisesy, tato ho ato, ireo solombavambahoaka. Nifarimbona nitaky ny fampi­asana an’ireo angidim-by any amin’ireo kaominina tsy mandry fahalemana ny ankamaroan’izy ireo. “Maninona izy ireny no tsy ampiasaina hanenjehana dahalo? ”, hoy ireo depiote.
“Tokony hitondra fanazavana misimisy kokoa amin’ ireny halatra taova sy taolam-paty ireny ihany koa ianareo ao amin’ny governemanta satria lasa feno tahotra sy mitebiteby lava ny vahoaka”, araka ny toromarika nataon’ ireo olom-boafidy.
Tonga teny an-toerana nihaona tamin’ireo depiote ny minisitry ny Fiarovam- pirenena, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ary ny minisitry ny Fitsarana.
Raharaha depiote sy zanadary Nandamòka ny fikononkononana tetsy Tsimbazaza
Raharaham-pitsarana Noferana faran’izay kely ny asan’ny tribonaly amin’ireo faritra dimy